Mee ka ọnụnọ Google SERP gị dị mma site na Snippets Rich a | Martech Zone
Ndị ụlọ ọrụ na-eji oge buru ibu na-ahụ ma ọ bụrụ na ha dị ogo na ọchụchọ na ịmepụta ọdịnaya na saịtị dị ịtụnanya na-eme mgbanwe. Mana usoro igodo na-efukarị bụ otu ha nwere ike isi bulie ntinye ha na a Nsonaazụ nchọta njin ọchụchọ. Ma ị na-ogo ma ọ bụ na ọ bụghị naanị ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na a manyere onye ọrụ ọchụchọ ka ọ pịa.
Ezie na a nnukwu aha, meta nkọwa, na permalink nwere ike melite ndị Ohere… na-agbakwunye ọgaranya snippets gị na saịtị ahụ nwere ike budata ụgbọala click-site udu. Dịka ọmụmaatụ, chee echiche, ịchọrọ ngwaahịa na ntanetị na ndepụta nke ntinye dị. Ọ bụrụ na ika ọkara ala peeji na-agụnye ihe oyiyi, ịnye ọnụahịa, nnweta, ma ọ bụ a nyochaa a ị nwere ike ịbụ ihe ndị ọzọ amanye pịa na ntinye kama ndị dị n'elu.
SERP bụ peeji ọdịda na ebumnuche nyocha ma ọ bụ ịzụta. Akụkụ bụ isi nke usoro nyocha ihe ọmụmụ gị kwesịrị ịbụ iji mejuputa ma bulie ọhụhụ gị na ibe nsonaazụ ọchụchọ ahụ… na ọgaranya snippets bụ ụzọ gị isi mee nke ahụ.
Google Snippet Resources
Can nwere ike na-ezo aka Schema.org na otu esi emezu snippets bara ụba - nke ahụ bụ ụkpụrụ Google na-eji. E nwere ụzọ atọ nke gụnyere data a n'ime saịtị gị, dika Google:
Microdata - Nkọwapụta obodo HTML akọwapụtara iji akwụ ụgwọ data ahazi n’ime ọdịnaya HTML. Dị ka RDFa, ọ na-eji njirimara mkpado HTML akpọ aha njirimara ịchọrọ igosipụta dịka data ahaziri. A na-ejikarị ya na ibe ahụ, mana enwere ike iji ya n'isi.
RDFa - Otu HTML5 ndọtị na-akwado njikọ data site ewebata HTML mkpado àgwà na-ederịta akwụkwọ ozi na onye ọrụ-anya ọdịnaya na ị chọrọ ịkọwa maka search engines. A na-ejikarị RDFa eme ihe na isi na akụkụ ahụ nke ibe HTML.
Nwaleenụ Akụ Akụ Gị
Google Snippets Ọgaranya
Ahịa Mojo nyere ndepụta a nke Google Snippets Rich na ha infographic, 11zọ XNUMX iji Google Rich Snippets mee ka ọchụchọ Gị ka Mma. Nke a bụ ndepụta nke snippets bara ọgaranya:
Nyocha - enwere ike iji gosipụta nyocha na ogo maka ngwaahịa ma ọ bụ azụmaahịa na nsonaazụ ọchụchọ.
Ezi ntụziaka - enwere ike iji gosiputa nkọwa ndi ozo banyere uzommeputa, dika ihe ndi ozo, oge nri, ma obu kalori.
ndị mmadụ - enwere ike igosipụta ozi dịka ọnọdụ, aha ọrụ na ụlọ ọrụ na nsonaazụ ọchụchọ maka mmadụ - gụnyere aha ha, foto, na njikọ mmekọrịta ha.
Business - nkọwa gbasara azụmahịa ma ọ bụ nzukọ dịka ọnọdụ, nọmba ekwentị, ma ọ bụ ọbụbụ akara ngosi ha.
ngwaahịa - enwere ike ere ahia peeji nke iji gosiputa ozi dika ego, onyinye, ntule ahia na nnweta.
Ihe - ihe omume ntanetị, egwu, ememme, nzukọ, nwere ike inye nkọwa ndị ọzọ gụnyere ụbọchị, ọnọdụ, onyonyo, na ọnụahịa tiketi.
Music - omenkà ọmụma gụnyere ha oyiyi, albums, na ọbụna ihe agbakwunyere ọdịyo faịlụ na-ege ntị.
Video - a thumbnail na play button nwere ike na-egosipụta, na-amụba click-site udu site 41%.
Apps - budata na ozi ndị ọzọ na nyiwe ngwanrọ na ngwa mkpanaka.
Breadcrumbs - nye usoro nhazi nke webusaiti gi ka onye nyocha ihe nyocha gha mekorita nke otu isiokwu na udi ma obu ngalaba.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ihe omimi n’ime snippets bara ụba - gụọ 28 Google snippets bara ụba ị kwesịrị ịma [ndu + infographic]. Frantisek Vrab dere akwụkwọ nduzi doro anya nke ọma na nkọwapụta koodu, nyocha, na ozi enyemaka ndị ọzọ.
28 Google Rich Snippets I Kwesịrị Knowmara
Otu nkenke ihe e mebiri emebi bụ edemede edemede. Ọ bụ ihe nwute (na uche m) na Google wepụrụ nke a dịka m kwenyere na ọ na-enye ndị mmadụ ọfụma ọfụma na isiokwu ha dere n'ofe weebụ.
Tags: infographicjson-ldmicrodatandị mmadụrdfaNyochampempe akwụkwọ mpempe akwụkwọọgaranya snippetsatụmatụnhazi iheagwovideo